Bụrụ FAQs - Chengdu Baishixing Science and Technology Industry Co., Ltd.
Amino acid & ihe mmepụta ya
Amino acid echedoro
Vitamin na ndị ọzọ
Ajụjụ: Ị bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa ma ọ bụ emeputa?
A: Anyị bụ ndị na-emepụta ngwaahịa niile edepụtara ebe a.
Ajụjụ: Anyị nwere ike ịtụ amino acid anaghị edepụta na netwọk?
A: EE, Anyị na-enye ndị ahịa synthesize ọrụ dị ka gị chọrọ.
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka oge nnyefe gị dị?
A: Nnyefe oge bụ n'ozuzu 7 ~ 15 ụbọchị mgbe nnata ukara iwu.
Q: Ị na-enye samples?Ọ bụ n'efu ka ọ bụ mgbakwunye?
A: Anyị na-enye ihe atụ n'efu.
Ajụjụ: Kedu otu esi ejikwa àgwà ahụ?
A: A ga-anwale ogbe ngwongwo ọ bụla wee nweta nkwado nke QA, ma anyị nwere nyocha nke QC iji nyochaa ịdịmma ya.
Ajụjụ: Gịnị bụ ngwugwu gị?
A: Ngwunye anyị na-ahụkarị bụ 25kg/gbọmgbọm, n'ime e nwere akwa abụọ nke akpa PE trasparent.
Ajụjụ: Kedu ka m ga-esi mara ọkwa mbupu mgbe akwụchara ụgwọ?
A: Nkọwa mbupu gụnyere mbukota, nsuso mba.na nbudata foto, a ga-emelite akwụkwọ mbupu site na ozi-e.
No.217,North nke Industry Road,Heshan Town,Pujiang County,Chengdu,Sichuan,China.
L-Leucine, Kemịkalụ ọgwụ, L-Glutamine ntụ ntụ, Acetyl-L-Leucine, Dl-Pyroglutamic acid, 537-55-3,
Mkparịta ụka WhatsApp n'ịntanetị!